Shir looga Hadlayo Qaxootiga Kenya oo Nairobi uga Furmi doono dowladaha Dariska ah – Radio Daljir
Shir looga Hadlayo Qaxootiga Kenya oo Nairobi uga Furmi doono dowladaha Dariska ah
Abriil 21, 2015 3:57 b 0
Talaado, Abriil 21, 2015 (Daljir) — Dowladda Kenya ayaa maanta lagu wadaa iney marti galiso wada hadal saddex geesood ah oo u dhaxeeyo dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR.
Wada hadaladaas Saddex geesoodka ah oo sanadkii aynu soo dhaafnay burburay kadib markii dowlada Somalia ay ku eedeysay Kenya iney si qasab ah ku celisay qaxooti Soomaaliyeed, ayaa maanta lagu wadaa in lagu gaaro heeshiis diiradda lagu saaraayo celin tabarucaad ah oo Qaxootiga Soomaaliyeed ay dib ugu noqonayaan wadankooda.
Sidoo kale wada-hadalkaan, ayaa wuxuu yimid kadib markii shalay ay Kenya ku kulmeen Ra’iisal Wasaaraha Somalia Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo Madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Madaxweyne ku xigeenka kenya.
“Wada hadalkaan waxaa lagu ogolaaday shir u dhaxeeyay Ra’iisal Wasaaraha Somalia iyo Madaxweyne ku xigeenka Kenya” ayaa lagu yiri war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Ruto.
Ra’iisal Wasaaraha Somalia Cumar Cabdirashiid oo booqasho ku joogo wadanka kenya, ayaa lagu sheegay warkaas inuu kala hadlay Madaxweyne ku xigeenka Kenya, xiriirka u dhaxeeyo labada dal iyo waliba xaaladda ammaanka.
Shir looga Hadlayo Qaxootiga Kenya oo Nairobi uga Furmi doona dowladaha Dariska ah
BARNAAMIJKII SAAKA IYO DUNIDA,TALAAD,21_ [DHAGAYSO]